एचडीमा जनता टेलिभिजन र देशभर सुनिने रेडियो « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 10 February, 2019 3:16 pm
जनता प्रसारण तथा प्रकाशन सात वर्ष पूरा गरी आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवधिमा जनता टेलिभिजन, रेडियो जनता ८९.१ मेगाहर्ज, जनता समाचार डटकम र प्रकाशन गृह सञ्चालनमा आएको छ । रेडियो जनताले आज (आइतबार) बाट पूर्ण प्रसारण पनि शुरू भएको छ । यिनै, विषयमा केन्द्रीत रहेर रेडियो जनताको कार्यक्रम समय सम्वादमा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष डा.विजयकुमार पौडेलसँग गरिएको सम्वादको सम्पादित अंश ।
जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड यो सात वर्षको यात्रामा कहाँ पुग्यो ?
–पैसा र अन्य माध्यमका कारण जनताको आवाज नरोकिने जनताकै वास्तविक आवाज बोक्ने सञ्चार माध्यमको खोजीमा थियौं । त्यसपछि सानासाना पैसा जुटाएर पनि ठूलो काम गर्न सकिन्छ भनेर परीक्षणका रुपमा प्रकाशन शुरू गरियो ।
नेपालमा गरिखाने बातावरण नभएकाले मान्छेमा सवै कुरा बिनामुनाफा चल्नुपर्छ र सवै सित्तैमा चल्नुपर्छ भन्ने भ्रम छ । त्यसरी त व्यवसाय नै चल्दैन । सरकारले पनि घाटामा गएको संस्थाहरू बेच्छन् । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सरकारले घाटा–नाफा नहेरी चल्नुपर्छ । अरूमा त सरकारले पनि विजनेस गर्ने हो । सरकारले पनि घाटामा चल्नु हुँदैन । त्यसैले अध्ययनमै ६ वर्ष खर्च भयो । अनि, दुई वर्षदेखि जनता समाचार डटकम, १९ महिनादेखि टेलिभिजन र रेडियो जनता पूर्ण प्रशारणमा आएको छ ।
नेपाली मिडियाको मूल प्रवाहमा जनता प्रशारण तथा प्रकाशनको पृथकता के हो ?
–आमजनता, खासगरी श्रम गर्ने किसान, मजदुर, पेशाकर्मी, मध्यमदेखि धनी किसान र शहरका बुद्धिजिबीसम्मको मिडिया हामी बनिसकेका छौं । तर, ग्ल्यामर रूचाउने माथिल्लो वर्गमा पुगेको छैनौं, स्वीकार्नुपर्छ । हामी यस्तो जनताका प्रतिनिधि हौं । जसले राम्रो पक्षको मूल्याङ्कन गर्छौ र कमजोरी स्वीर्काछौं । उच्च वर्गकालाई पनि जनताको आवाज सुन्न मन लाग्छ । जनभावनामा डोहो¥याउनुपर्छ पनि । तर, त्यो बाटो अलिक फरक छ । ग्ल्यामर र महँगा कार्यक्रमको बाटो छ । हामीले सालिन र भद्र कार्यक्रम बनाएका छौं । अव, जनतालाई सहभागिता गराउने कार्यक्रम ल्याउनेछौं । आजै पनि टेलिभिजनको स्क्रीनमा फरकपन देखिनेछौ । क्रमशः एचडीमा जाँदैछौं । रेडियोलाई एक वर्षभित्र्र देशभर सुन्न सकिने बनाउने अभियानमा छौं ।
मुनाफारहित भन्ने आदर्शवादी सञ्चार अभ्यासबारे पनि छलफल शुरू भएको छ । उनीहरुको तर्क छ– नाफाले जनहित भुल्छ । तपाइलाई के लाग्छ ?
–मुनाफारहित हुन सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । मिडिया अनुदान वा मुनाफाबाट चल्छ । नेपाल टेलिभिजनलाई पनि आफैं कमाएर खाऊ भनिएकै हो । मुनाफारहित हुने क्षेत्रहरू पनि छन् । तर, बिस्तारै गर्नुपर्छ । अस्पतालमा सस्तो पैसा वा निशुल्क गर्ने, सरकारी विद्यालयहरूमा निश्चित तहसम्म निशुल्क पढाउनुपर्छ । अनि, घुमाउरो तरिकाले एनजिओ÷आईएनजिओबाट पैसा ल्याएर मुनाफारहित छौं भन्नेहरूको छुट्टै कुरा हो । होइनभने, कुनैपनि बिजनेसमा लगानीकर्तालाई कम्तिमा निश्चित ब्याज मात्रै पनि फिर्ता नगर्ने हो भने कसले लगानी गर्छ ?
मिडियामा पारदर्शी विकल्पका रुपमा जनताको लगानीलाई रोजिएको हो ?
–पशुपतिमा बृद्धाश्रम बनाइदिने काम मुनाफारहित हुन्छ । होइनभने, मुनाफाबिना बिजनेस चल्दैचल्दैन । सरकारले संस्थान त चलाउन सकिरहेको छैन ।
विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नीजि लगानीका मिडिया खुल्ने होड नै चलेको छ । यो सञ्चार गृहले चाँही कस्तो बाटो समात्छ ? जसले गर्दा सफल अनि फरक देखिन्छ ?
–थोरै व्यक्तिको लगानीमा खुलेका मिडियाहरू वित्तीय स्वार्थबाट मुक्त हुन सक्दैन । तर, धेरै व्यक्तिको लगानी भएपछि पारदर्शिताका साथसाथै जनहितकै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सञ्चार गृहमा काम गर्ने तपाइहरूले भोग्नै भएको छ । सानो अक्षर फरक पर्दा फोन आउँछ । किनभने, हामीलाई देशैभरका साथीहरुले हेरिरहनुभएको छ । सायद, यस्तो कुरा अरू मिडियामा कमै हुन्छन् ।
भनेपछि, व्यापक जनसहभागिता यो सञ्चार गृहको फरक विशेषता हो ?
–हो, पक्कै ।
निश्चित व्यक्तिको लगानीले पूरै समाजलाई ‘लिड’ गरिहेका बेला ब्यापक सहभागिताबाट चलेका मिडियाले कसरी प्रतिश्पर्धा गर्ला ?
–सामान्य मानिसहरुबाट ठूलो मिडिया चलाउन सकिन्छ र ? भन्ने विश्वास भएको ठाउँमा यो संस्था र प्रणालीलाई लिएर जान अझै धेरै संघर्ष र उकाली–ओरालीको पहाड छिचोल्नु छ । तर, आमजनताको विषय बनाइयो भने सफल भइन्छ । जनताले देश त चलाइरहेका छन् भने मिडिया चलाउन किन नसक्ने ? सकिन्छ । देश पाल्न सक्ने जनताले मिडिया पाल्न सक्छन् ।
कालो धनलाई सेतो बनाउन मिडिया चल्छ भन्ने आरोप पुरानै हो । यसबारे तपाईको अडान र अभिव्यक्ति के हो ?
–धेरै ठाउँबाट आउने कुरा हो, यो । एउटा मिडिया चलाइरहेको मानिस भएर अरुको बारेमा के बोलौं र ? तर, मिडियामार्फत् नै निवेदन गर्छु– हाम्रो सञ्चार गृहबाट समाचार वा कुनै माध्यमलाई आधार बनाउर कसैले बार्गेनिङ गर्दैन । यदि, गरेको थाहा भए खबर दिनुहोला, तत्कालै कार्बाही हुन्छ । अरूले पनि यहीबाट हिड्नुपर्छ ।
गलत क्षेत्रको लगानी रोक्न र त्यस्ता आरोपबाट बच्न यो सञ्चार चलेको हो, भन्न सकिन्छ ?
–विदेशी लगानी मिडियामा आयो भन्ने सुनिएको छ । यो त सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ । यसबारे सम्बन्धित निकायले अध्ययन, छानबिन र कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अर्थशास्त्री र सामाजिक अभियान्ताका रुपमा नेपाली समाजका विभिन्न उतारचढाबका साक्षी पनि हुनुहुन्छ, तपाईं । नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक संरचनाको बाटो बदलिएको छ । अव, नेपाली मिडियाको चरित्र कस्तो हुनुपर्छ ?
–अर्थशास्त्रका विद्यार्थी भएकाले मलाई नेपाली मिडिया तीन वटै क्षेत्रबाट चल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । सार्वजनिक, सहकारी र नीजि । सरकारले आफ्नो भाषा बोल्न अरूलाई पत्र लेख्ने अवस्था आउनुहुन्न । देशमा आइपर्ने संकटका बेला यस्तै मिडिया चाहिन्छ । अर्काे, ठूला लगानीका ग्लामर रूचाउने वर्गका लागि खुल्ने मिडिया पनि ठिकै हुन्छ । र, आम जनताको लगानीमा खुल्ने हाम्रोजस्तो मिडिया ।
नीजि लगानीको सार्वजनिक मिडियाबारे भने खासै बताइएको छैन । बरू, भ्रम छ । किनभने, सवै जनताको सम्पत्ति सामुहिकरण गर्ने अवस्थामा हामी छैनौं । विगतको शोभियत संघ यो कुराबाट असफल भयो । चीन पनि सांस्कृतिक क्रान्ति १९७६ पछि सवै सम्पत्ति सरकारी गर्ने विषयबाट फिर्ता भयो । जब, समाजमा नीजि सम्पत्ति रहन्छ, तब त्यसलाई लगानीको क्षेत्र रहनुपर्छ र त्यसले मुनाफा पाउनुपर्छ । अनि, मुनाफाको सीमा र कर छल्ने कुरा रोक्नुपर्छ । तर, अर्थतन्त्रका तीन वटै क्षेत्रलाई चल्न दिनुपर्छ । र, मिडियामा पनि त्यही गर्नुपर्छ ।
अहिले देश र समाजजस्तो संक्रमणमा छ । मिडिया पनि त्यस्तै अवस्थामा छ ?
नीजि लगानीमा सार्वजनिक मिडियाको अवधारण चाँही कसरी आयो ?
–सानो लगानीमा दश÷दश हजार जुटाएर रेडियो खोल्यो । काम त राम्रो हुने तर, दायरा सानो हुने भएकाले त्यति प्रभावकारी नहुने । त्यसपछि ठूलो लगानीकर्ताहरुले आमजनताको भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा बोल्ने । जस्तो– कुनै उद्योग खुल्छ । ज्याकेट विज्ञापन पाएसम्म प्रशंसा गर्छ । अनि, विज्ञापन पाउन छोडेपछि बिरोधमा उत्रन्छ । यो अवस्था देखेपछि ठूलो लगानीको मिडिया जनताबाटै चल्नुपर्छ भन्ने भयो ।
तर, अर्वौ लगानी गर्ने मानिस हामीसँग आउदैनन् । त्यसपछि लाखलाख जुटाएर देशको राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्न यो अभियानको शुरु गरियो । विशेषगरी एउटा घटनाले यो सञ्चार गृहलाई आकार दिन सहयोग गरेको छ । संविधानसभामा रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । सरकारी मिडिया दुविधाको कुरा गर्थे । तर, नीजि क्षेत्रका ठूला मिडिया हाउसले संविधान आएन भने देश संकट जान्छ भनेन् । बरू यतिका समय संविधान आएन, दुई वर्ष लम्ब्याए के हुन्छ ? भन्नेगरी विदेशी हस्तक्षेपलाई स्वीकार÷संरक्षण गर्ने काम भयो । यसपछि वास्तविक जनताको लगानीमा मिडिया चाहिन्छ भन्ने अनुभव भयो ।
संविधान जारी भएपछि देश संघीय अभ्यासमा गएको छ । अव, यो सञ्चार गृहको कन्टेन्ट कस्तो हुन्छ ?
–देश संघीयता गइसकेपछि मिडियाको कन्टेन्ट पनि सोही अनुरुपको हुनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश स्तरका कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, संघीय गतिविधि त छदैछ । मुलतः अवको मिडिया कन्टेन्ट सुशासन, राष्ट्रियताको रक्षा र गरिखाने बातावरण बनाउन केन्द्रीत हुनुपर्छ । आउने २० वर्षलाई नेपाल निर्माणको एउटा स्वर्णीम काल बनाउन गरिखाने बातावरणका लागि मिडियाले आफ्नो कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ । हाम्रो मिडियामा गरिखाने मानिसहरुको सम्मान गर्न सकारात्मक सोचजस्तो कार्यक्रम नै चलेको छ । दुई पैसा बढी पाइन्छ भनेर विदेश जाने होइन, बरू कसरी दुख गरेर देशमै बस्न र बाँच्न सकिन्छ भन्ने उत्प्रेरणा जगाउने कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ ।
एकल स्वामित्वमा रहेका मिडियाहरु प्रदेशस्तरमा गए । यो सञ्चार गृह कसरी अगाडि बढ्छ ?
–प्रदेश नम्बर तीन बाहेक सवैमा प्रदेश कार्यालय खुलेको छ । अव, क्रमशः जनता प्रशारण तथा प्रकाशन प्रदेश स्तरमा मात्रै होइन, जनमनसम्म पुग्छ ।